आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक २१ गते। बुधबार। – AstroSimara.Com
By Astro Sudeep Dhakal	 On Nov 6, 2018
इश्वी सन् २०१८ नोभेम्बर ७ तारिख। शकसंवत् १९४०। विरोधकृत् संवत्सर। दक्षिणायन। शरद ऋतु। नेपाल संवत् ११३८ कौलागा। कार्तिक कृष्णपक्ष। तिथि– औंसी, २१:२२ बजेउप्रान्त प्रतिपदा। नक्षत्र– स्वाती, २०:२३ बजेउप्रान्त विशाखा। योग– आयुष्मान्, १९:३३ बजेउप्रान्त सौभाग्य। करण– चतुष्पद, ९:४१ बजेदेखि नाग, २१:२२ बजेउप्रान्त किंस्तुघ्न। आनन्दादिमा धुम्र योग। चन्द्रराशि– तुला। काठमाडौंमा सूर्योदय– ६:१९ बजे, सूर्यास्त– १७:१४ बजे र दिनमान २७ घडी १७ पला। यम-पञ्चक (तिहार), दीपमालिका, लक्ष्मी-पूजा, दीपावली, सुखरात्रि। दर्शश्राद्ध। निशि तथा हलो बार्ने औंसी।
जीवनलाई खेलाँची नसोच्नुहोस्, जीवनको हेरचाह गर्नु वास्तविक भाकल हो भनेर महसुस गर्नुहोस्। आज तपाईंले सजिलै धन बढाउन सक्नुहुन्छ – उल्लेखनीय ऋण सङ्कलन गर्नुहुन्छ – वा नयाँ परियोजनाहरूमा काम गर्नको लागि धनको अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। टाढाको आफन्तबाट अप्रत्याशित सुसमाचारले सम्पूर्ण परिवारमा खुसी ल्याउनेछ। रोमान्स रोमाञ्चक हुनेछ – त्यसैले तपाईंलाई मनपर्ने व्यक्तिसँग सम्पर्क गर्नुहोस् र दिनलाई उत्तम बनाउनुहोस्। होसियार चाल चल्नु पर्ने दिन – त्यसैले, तपाईंले यसमा धोका हुँदैन भन्ने निश्चित नभएसम्म आफ्नो विचार प्रस्तुत नगर्नुहोस्। कर र बीमाको विषयमा केही ध्यान दिनु आवश्यक हुनेछ। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
अनावश्यक कुराको बहसमा आफ्नो शक्ति बर्बाद नगर्नुहोस्। तपाईंले तर्कबाट कहिल्यै केही पाउनुहुँदैन तर केही अवश्यै गुमाउनु हुनेछ भनेर आफैलाई सम्झाउनुहोस्। नयाँ अनुबंधहरू आकर्षक लाग्न सक्छन्, तर चाहेको लाभ दिन सक्दैनन् – पैसा लगानीको विषयमा हतार गरेर निर्णय नलिनुहोस्। कुनै मानिसहरू आफुले गर्न सक्ने भन्दा बढी प्रतिज्ञा गर्छन – कुरा मात्रै गर्ने र कुनै परिणाम नदिने मानिसहरूलाई बिर्सिनुहोस्। शरद ऋतुको रूख। अचानक अप्रत्याशित लाभ प्राप्त हुनाले वा धनको वर्षा हुनाले व्यवसायीहरूको लागि राम्रो दिन हो। यात्रा गर्ने मौका खोज्नु पर्नेछ। ठूलो खर्चको कारण आफ्नो जोडीसँग तपाईँको झगडा हुन सक्छ।
तपाईंले लामो समयदेखि अनुभव गरिरहेको जीवनका तनाउ र खिचलोबाट राहत प्राप्त गर्नु हुनेछ। यिनीहरूलाई स्थायी रूपमा निकाल्न तपाईंको जीवन शैली परिवर्तन गर्ने सही समय हो। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूसँग केही तनाउमुक्त समय बिताउनुहोस्। तपाईंको प्रेम बहुमूल्य कुराहरू जस्तै ताजा राख्नुहोस्। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। आज तपाईंले किनमेल गर्न जानुभयो भने आफैलाई राम्रो पहिरन सामाग्री छनोट गर्न सम्भावना छ। आफ्नो जीवनमा आज विवाह सर्वश्रेष्ठ स्थानमा पुग्नेछ।
ध्यान र आत्म-बोध लाभदायी साबित हुनेछन्। अनुमान वा अनपेक्षित लाभ मार्फत वित्तीय स्थितिमा सुधार आउनेछ। तपाईंको कार्डमा धार्मिक स्थल वा आफन्तको घरमा भ्रमण गर्ने सम्भावना देखिन्छ। यो दिन तपाईंको प्रेम जीवनको मामलामा शानदार छ। प्रेम गरि राख्नुहोस्। आफ्नो पक्षमा भाग्य भएकोले आज तपाईंलाई लाभ हुनेछ किनकि तपाईं ठीक ठाउँमा र सही समयमा हुनु हुनेछ। आफ्नो जीवनमा पछि गएर पछुताउनु पर्ने कुरामा हतार निर्णय नगर्नुहोस्। आज आफ्नो शानदार जोडीको न्यानोसँग तपाईंलाई रोयल्टी झैं महसुस हुनेछ।
रक्तचापका विरामीहरुले आफ्नो रक्तचाप कम गर्न र कोलेस्ट्रल नियन्त्रणमा राख्न रेड वाइनको मद्दत लिन सक्नुहुनेछ। यसले तिनीहरूलाई धेरै आराम दिनेछ। आर्थिक सुधार निश्चित छ। आफन्तहरू तपाईंलाई सहयोग दिन तयार हुनेछन्। तपाईंको प्रेममा अनुमोदन नहुन सक्छ। तपाईंले व्यावसायिक अवरोधको समाधान गर्न आफ्नो विशेषज्ञताको प्रयोग गर्नुहोस्। तपाईंको सानो प्रयासले सबैका समस्याहरू समाधान गर्न सक्छ। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आफ्नो जन्मदिन बिर्सेको वा केही अन्य कुरा बिर्सेको जस्ता साधारण कुरामा आफ्नो जोडीसित पुरानो मुद्दामा आज तपाईं भिड्न सक्नु हुन्छ। तर, सबै कुरा दिनको अन्तमा ठीक हुनेछ।
बाहिरी खेलहरूले तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछन् – ध्यान र योग लाभदायक हुनेछन्। आर्थिक समस्याले तपाईंको निर्माणात्मक सोच्ने क्षमतामा हानि पुर्याउनेछ। कसैका लागि – परिवारमा नयाँ सदस्यको आगमनले उत्सव र पार्टी ल्याउँछ। तपाईंको प्रेमीले आज उपहारका साथ केही समयको आशा गर्न सक्छन्। तपाईंमा धेरै हासिल गर्ने क्षमता छ – त्यसैले तपाईंको बाटोमा आएका अवसर नछोड्नुहोस्। तपाईं यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने, सबै महत्त्वपूर्ण कागजातहरू बोक्नुभएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आज सबै खुसी देखिन्छ।
आराम गर्नुहोस् र कामको बीचमा सकेसम्म धेरै आराम गर्ने प्रयास गर्नुहोस्। पैसाको समस्या दिनको पछिल्लो भागमा सुधार हुनेछ। तपाईंले आशा गरेझै काम गर्न असफल हुनाले बच्चाहरुले निराश गराउन सक्छन्। तपाईंले आफ्नो सपना पूरा भएको देख्नको लागि तिनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नु आवश्यक छ। कार्डमा एकजना रोचक व्यक्तिसँग भेट हुने सम्भावना देखिन्छ। साहसपूर्ण कदम र निर्णयले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ। कसै कसैको लागि अप्रत्याशित यात्रा व्यस्त र तनाउपूर्ण हुनेछ। तपाईंलाई आफ्नो वैवाहिक आनन्दको लागि एउटा अचम्मको आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
तपाईंले महसुस गर्ने तरीकामा नियन्त्रण गर्नुपर्छ। आज तपाईंले भूमि, अचल सम्पत्ति, वा सांस्कृतिक परियोजनाहरूसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ। तपाईंको ज्ञानको तिर्खाले नयाँ मित्र बनाउन मद्दत गर्नेछ। तपाईंका प्रियले प्रतिबद्धता खोज्नेछन् – पुर्याउन नसक्ने प्रतिज्ञा नगर्नुहोस्। व्यापार सम्पर्कमा सुधार ल्याउनको लागि यात्राको सम्भावना छ। दान र सामाजिक कार्यले आज तपाईंलाई आकर्षित गर्नेछ – तपाईंले महान कार्यको लागि आफ्नो समय दिनुभयो भने तपाईंले धेरै परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ। आज तपाईंको वैवाहिक जीवनको लागि संगै खाएर शुभ रात्री बिताउने अपेक्षित छ।
संतोषजनक जीवनको लागि आफ्नो मानसिक क्रूरतामा सुधार ल्याउनुहोस्। प्राचीन वस्तु र गहनामा लगानी गर्नाले लाभ र समृद्धि हुनेछ। घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईंको तनाउ कम गर्नेछ। तपाईं पनि भागेदार हुनुहोस र मूक दर्शक जस्तो भएर नबस्नुहोस्। आफ्ना प्रेमको अनावश्यक माग गर्न छोड्नुहोस्। आज तपाईंको मनमा आएका नयाँ पैसा बनाउने विचारको फाइदा लिनुहोस्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने – त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनमा आजभोली कुनै खुशी छैन; आफ्नो जोडीसँग कुरा गर्नुहोस् र साँच्चै रमाइलो केही योजना गर्नुहोस्।।
तपाईंको डाह गर्ने व्यवहारले तपाईं दुःखी र निराश बनाउन सक्छ। यो स्वयं लगाएको चोट हो र यसैले यस बारेमा विलाप गर्नु कुनै आवश्यकता छैन। अरूलाई आनन्द र दुख बाँडेर यसबाट छुटकारा प्राप्त गर्न आफैलाई प्रोत्साहन गर्नुहोस। आर्थिकमा सुधार आउनाले तपाईंलाई अत्यावश्यक वस्तुहरू खरिद गर्न सुविधा हुनेछ। घरेलु काम गलाउने हुनेछ र यो मानसिक तनाउको लागि एउटा प्रमुख कारण बन्नेछ। प्रेम सम्बन्धमा दास जस्तो व्यवहार नगर्नुहोस्। आफूलाई धोखाबाट सुरक्षित राख्नको लागि व्यापारमा चनाखो हुनुहोस्। तपाईंको इच्छा अनुसार सबै कुराहरू अगाडि बढीरहेको समयमा एउटा जोडको हाँसोले दिनभरी खुशी ल्याउँछ। आफ्नो छिमेकीले तपाईंको वैवाहिक जीवनमा समस्या बनाउने प्रयास गर्न सक्छ, तर यसले तपाईंहरूको प्रेमको बन्धन हल्लाउन गाह्रो छ।
आजको मनोरञ्जनमा खेल गतिविधिहरु र घर बाहिरका कार्यहरू समावेश हुनुपर्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। तपाईंले आफ्नो घरको वातावरण परिवर्तन गर्न अघि सबैको अनुमोदन लिएको छ भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तपाईंले कुनै वनभोज स्थलमा गएर आफ्नो प्रेमी जीवनलाई रोशन गर्न सक्नुहुन्छ। होसियार चाल चल्नु पर्ने दिन – त्यसैले, तपाईंले यसमा धोका हुँदैन भन्ने निश्चित नभएसम्म आफ्नो विचार प्रस्तुत नगर्नुहोस्। आफ्नो कुराकानीमा स्वाभाविक हुनुहोस् किनभने एउटा कार्यले तपाईंलाई कतै न कतैको बनाइदिन्छ। तपाईंको जोडी यति सुन्दर कहिल्यै थिएन। तपाईंलाई आफ्नो जीवनको प्रेमबाट राम्रो आश्चर्य प्राप्त हुन सक्छ।
बच्चाहरुले तपाईंको साँझ रमाइलो पार्नेछन्। नीरस र व्यस्त दिनलाई बिदा गर्न एउटा राम्रो खाने योजना गर्नुहोस्। उनीहरूको भेलाले तपाईंको शरीरलाई पुन ऊर्जा दिनेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। मानिसहरूले तपाईंलाई नयाँ आशा र सपना दिनेछन् – तर धेरैजसो तपाईंको आफ्नै प्रयासमा निर्भर गर्नेछ। तपाईंको कार्डमा तलाउमा सुन्दर बास भेट्ने सम्भावना उँचो छ। नयाँ साझेदारी आज कष्टपूर्ण हुनेछ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईंको जोडी आफ्नो जीवनमा तपाईंको मूल्य वर्णन गर्दै केही सुन्दर शब्दहरू लिएर आउनेछन्।
आजको राशिफल वि.सं. २०७५ साल कात्तिक २६ गते। सोमबार।